नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : आईजीमा सिंह रोलक्रम मिचेर नियुक्त, प्रधानमन्त्री देउबाको अर्को नालायकी पनले प्रहरी संगठनमा फेरी भाँड भैलो, दुई एआइजी अदालत, आइजिपी नियुक्ती उल्टिन सक्छ !
आईजीमा सिंह रोलक्रम मिचेर नियुक्त, प्रधानमन्त्री देउबाको अर्को नालायकी पनले प्रहरी संगठनमा फेरी भाँड भैलो, दुई एआइजी अदालत, आइजिपी नियुक्ती उल्टिन सक्छ !
सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा राजु अर्याललाई बढुवा
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजी)मा धीरजप्रताप सिंहलाई रोलक्रम मिचेर सरकारले नियुक्त गरेको छ । करोडौंको मोलमोलाई भैरहेको छ भन्ने हल्लाका बिच आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपी बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सिंहभन्दा डेढ वर्षअघि बढुवा भएका एआईजी विश्वराज पोखरेल र झण्डै एक वर्षअघि बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर सरकारले सिंहलाई आईजी बनाएको हो । यसले नेपाल प्रहरिको संगठनमा भाँड भैलो मच्चिएको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि एआईजीद्वय विश्वराज पोख्रेल र सहकुल थापा अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
एकै ब्याच भए पनि आफूभन्दा कनिष्टलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै एआईजीद्वय पोख्रेल र थापा अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । पोखरेल सिंहभन्दा १६ महिनाअघि र थापा ११ महिनाअघि एआईजी बनेका थिए । आफूहरू वरिष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्टलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने उनीहरूले बताए ।
स्मरणीय कुरा यो छ कि त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरीयतामा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाए । १ फागुन २०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वरिष्ठ डीआईजीहरूलाई पाँखा लगाउँदै चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो नम्बरमा थिए, डीआईजी नवराज सिलवाल । त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा थिए, प्रकाश अर्याल । तर, देउवाले तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाईदिए ।
‘नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै चन्द डीआईजीमै घटुवा भए । दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल आईजीपी बने । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल पुनः सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले सरकारले गरेको निर्णय सदर गरेपछि डीआईजीबाटै राजीनामा दिए । र, एमाले प्रवेश गरे ।
तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वरीयताक्रम मिच्न नहुने अडान लिएका थिए । उनको पक्षमा तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । तर, देउवा भने जसरी पनि चन्दलाई आईजीपी बनाउने अडानमा रहे । अन्ततः उनले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव लत्याउँदै चन्दलाई आईजीपी बनाए । पछि अदालतले उनको निर्णय उल्ट्याइदियो ।त्यो घटनाबाट देउवाले ठूलै पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले फेरि त्यही प्रकरणको झझल्को दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको ठाडो प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै देउवाको ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो । गृह मन्त्रालयले पहिलो नम्बरमा एआईजी विश्वराज पोखरेल, दोस्रो नम्बरमा सहकुलबहादुर थापा, तेस्रो नम्बरमा धिरजप्रताप सिंह र चौथो नम्बरमा रवीन्द्र धानुक थिए । तर, देउवाले आफ्नै गृहजिल्लाका सिंहलाई आईजीपी बनाएका हुन् । गृह मन्त्रालयको उक्त सिफारिस लत्याउँदै देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय सुनाएका थिए ।यसअघिको घटनाबाट पाठ नसिकेका देउवाका लागि फेरि अदालती झमेलामा पर्ने देखिएका छन् ।
आईजीपी नियुक्तिमा सिंहभन्दा सिनियर दुई एआईजी असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरू अदालत जाने तयारीमा छन् । त्यसका लागि छलफल भइरहेको र सम्भवतः भोलिसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक छलफल तथा तयारी भइरहेको असन्तुष्ट एक एआईजीले बताए । यसअघिको घटनाबाट पाठ सिकेर देउवाले आफ्नो मान्छे भन्दा वरीयताक्रमअनुसार पहिलो नम्बरमा रहेकालाई आईजीपी बनाउन सक्नुपर्थ्याे । अदालतले उनको निर्णय खारेज गरिदियो भने देउवालाई नैतिक संकट आइलाग्न सक्छ ।
यसै बिच सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा राजु अर्याललाई बढुवा गरिएको छ । आज (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्याल वैशाख १४ गते एआईजीपीमा बढुवा भएसँगै आईजीपीका एकल दाबेदार थिए । सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीबाट मात्रै आईजीपी बनाउने प्रावधान छ ।